बहुसंख्यक नागरिकले प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ «
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना व्यतीत भइसकेको छ । ६ महिनापछि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक तथ्यांकले सरकारको पुँजीगत खर्च नाजुक रहेको देखाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि नेपाल सरकारले झैं बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी :
अबको योजना हचुवाको आधारमा बन्दैन
नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश
नीति तथा योजना आयोगमा मेरो भर्खरै नियुक्ति भएको छ । पुसको १५ गते मात्रै मैले शपथग्रहण गरें । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अफिस राखिएको छ । नयाँ बनेको आयोगले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय राख्ने भवनको खोजी गर्दैछौं । कर्मचारीको दरबन्दी पास गराउँदै छौं । सचिवालयले कार्यालयलाई चाहिने बजेटको व्यवस्थापन गर्दैछन् । हामी अहिले कार्यालय स्थापनाको चरणमा काम गरिरहेका छौं । बजेट र योजनाको सवालमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म काम गर्दै आएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा मन्त्रालयले गरेको होला । गर्ने गरेको भए यस वर्ष पनि गर्छ होला । कुन स्तरमा के–के कार्यक्रम बढाइरहेको छ र कुन–कुन कार्यक्रमको के–के समीक्षा गरियो र कुन–कुन बाँकी छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अझै बुझ्ने अवसर पाएको छैन । हामी पहिले कार्यालय व्यवस्थापन गरिसकेर त्यसमा लाग्छौं । केही दिनपछि, हामीले जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सम्हालिसकेपछि, के–के काम बाँकी छन्, के–के भए र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाउँछौं ।
हामी समग्र सुदूरपश्चिमको पिछडिएको अवस्थालाई समृद्ध र सुन्दर सुदूरपश्चिम कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना र त्यसका लागि चाहिने नीति बनाउनतिर लाग्छौं । त्यसका लागि हामीले प्रदेशको मानचित्र नै तयार गर्छौं । परनिर्भरतामा रहेको सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सुदूरपश्चिममै रहेका पुँजी, स्रोत, साधनको सदुपयोग गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, यातायात, पर्यटन क्षेत्रमा विशेष प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्नेछौं । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई समेत टाई अफ गरेर योजनाहरू बनाउनेछौं ।
मध्यकालीन खर्च संरचना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको छ । त्यसबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । योभन्दा पहिले हचुवाका आधारमा योजनाहरू बनाउने गरिएको सुनिन आएको छ । पुँजी, स्रोत र साधनको यथार्थ क्षमताका आधारमा र त्यसबाट उपलब्ध हुने प्रतिफलको आधारमा योजना तर्जुमा आयोगले गर्नेछ । अब हचुवाको आधारमा योजना बन्दैन । हामीले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू बनाउँदा स्थानीय तहमा गएर त्यहाँका नागरिकहरूको रायसमेत लिएर बहुसंख्यक नागरिकले प्रतिफल पाउने गरी हामीले योजना बनाउनुपर्छ । त्यसको डिटेल सर्भे गरेर लागत कति लाग्छ र लागतअनुसार नागरिकले कति प्रतिफल पाउँछन् भन्ने आधारमा योजना तर्जुमा गर्दा योजनाहरू दोहोरो पर्ने र प्रभावहीन हुँदैन । स्थानीय तहले बनाएका योजनाहरू मिसमास नहुने गरी बृहत् र अलि ठूला खालका योजनाहरू प्रदेशस्तरका योजनाहरू बनाउनेछौं । हामीले योजना बनाउँदा सरकारले लिइएको दिगो विकास लक्ष्यलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय नीति, प्रादेशिक नीति, स्थानीय तहका दीर्घकालीन नीतिहरूलाई हेरेर हामीले नयाँ योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजनाहरू बनाउनैपर्ने मैले देखेको छु । जस्तै, सबैभन्दा बढी रासायनिक र जैविक मलको कारखाना आवश्यक छ । किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषि उत्पादनमा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । मलको अभावका किसानहरूलाई धेरै दुःख पाएको देखिन्छ । प्रदेशमा ठूल्ठूलो कोल्ड स्टोरहरू निजी र सरकारीस्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ताकि यहाँ किसानहरूले आफ्ना उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकून् । प्रदेशमा एउटा पनि सिमेन्ट कारखाना छैन । प्रदेशमा यो स्थापना गर्न पनि अति महŒवपूर्ण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपि, साइपाल हिमालमा पर्वतारोहणको योजना पनि आवश्यक छ । विदेशीहरूलाई भिœयाउन अपि, साइपाल आरोहरणका लागि खुला गरिनुपर्छ । सुदूरपश्चिममा सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको हाम्रो प्रदेशको खण्डलाई द्रुतस्तरमा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा अति नै राम्रो भविष्य भएको खप्तड, रामारोशन क्षेत्रको डिटेल सर्भे गरेर गुरुयोजना निर्माण गरी बढी फोकस हुनुपर्ने मैले देखेको छु । बडिमालिका, वैद्यनाथ, त्रिपुरा सुन्दरी, उग्रतारा, शैलेश्वरी, घोडाघोडी, टीकापुर क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनको एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तराईको व्यापारिक नाकाहरूमा आधुनिक विकास गरेर भन्सार आवश्यक पर्ने ठाउँमा भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोधारा चाँदनी, झुलाघाट, टिंकरजस्ता ठाउँमा भन्सार नाका स्थापना गरी चोरी निकास नियन्त्रण गरेर राजस्वसमेत बढाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुुति : मुकेश चौधरी
पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्ने रणनीतिमा मध्यकालीन खर्च योजनाले सहयोग पु-याएको हुन्छ
डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल
नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि मध्यकालीन खर्च योजना बनाएका छौं । हाम्रो प्रदेशमा तीनवटा रिपोर्ट बनाएका छौं । पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा एक प्रकारको प्रक्षेपण गरी गरिएको कार्ययोजना बनाएका हुन्छौं । यसमा कहिलेकाहीं हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व, अनुदान, वैदेशिक सहायता पर्याप्त मात्रामा संकलन हुन नसक्दा मध्यकालीन खर्च योजनाले थप योजना संशोधन र खर्च व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ ।
यसले पञ्चवर्षीय योजनामा गरिएको प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न थप मद्दतसमेत पु-याएको हुन्छ । पञ्चवर्षीय योजनामा काम गर्दै जाँदा भएका केही ग्यापहरूलाई मध्यकालीन खर्च योजनाले समेट्ने गर्दछ । यसलाई हामीले हरेक वर्षको बजेटसँगै बनाएका हुन्छौं । विश्वव्यापी रूपमा यसको तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च योजना बनाएको पाइन्छ । हामी अभ्यासमै छौं । पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्ने रणनीतिमा कुनै बाधा–अड्चन र अपेक्षाकृत राजस्व वा स्रोतको जोहो नभएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन गर्न मध्यकालीन खर्च योजनाले मद्दत पुग्छ । क्षेत्रगत योजनाहरूलाई समेत यसले सहयोग पु-याएको हुन्छ । जस्तो भनौं भारतको मुद्रासँग नेपालको मुद्राको भर पर्ने भएको हुँदा नेपालको मुद्रास्फीति भारतमा भर पर्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको अवस्थामा त्यसको विकल्प पनि सोच्न यसले मद्दत पु-याएको हुन्छ ।
गत आवको भन्दा खर्च बढ्छ
सदस्य, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा चालू आवमा बजेट खर्च बढ्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ । बितेका ६ महिनामा सोचेजति खर्च हुन नसके पनि दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा खर्च बढ्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षका योजनाहरूमा काम भए पनि विविध कारणले भुक्तानी हुन सकेका थिएनन् । ती योजनाहरूको समेत भुक्तानी यसै आवमा गरिने भएकाले पनि खर्च गत वर्षभन्दा बढ्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने गरिएको छ । यस वर्षको समीक्षाका लागि सामान्य छलफल भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका खर्च गर्ने निकायहरूले हालसम्म गरेको खर्च प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । पहिलो चौमासिकमा धेरै खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । दोस्रो र तेस्रोमा खर्च बढ्ला । गत वर्ष टेन्डरमा गएका योजनाहरूको भुक्तानी पनि यस वर्ष हुँदैछ । बहुवर्षीय आयोजनाहरूको ठेक्काका कामहरू पनि भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको झन्डै ३ अर्ब कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै अन्य विभिन्न योजना पनि कार्यान्वयन सुरु भइसकेका छन्, तर तिनको भुक्तानी नभइसकेकाले खर्चमा नदेखिएको हो । भुक्तानीहरू हुन बाँकी छ । यी सबै भुक्तानी हुने बेला आएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुन्छ त्यसले गत वर्षभन्दा खर्च बढ्छ ।
योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च के छ भन्ने छलफल भए तापनि मध्यावधि समीक्षा भने भइसकेको छैन । मध्यावधि समीक्षाबाट अहिलेसम्म भएको खर्च, खर्च गर्न नसक्नुका कारणहरू केलाएर बजेटको यथार्थ आकलन गर्ने तथा खर्च गर्नका लागि अप्ठेराहरू फुकाउने काम हुन्छ । खर्च नहुने बजेटलाई रकमान्तर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अलि धेरै बजेट भएका सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, भेरी–बबई डाइभर्सनमा कम्पनी बनाएर विद्युत्मा लगानी गर्ने भन्ने योजना छ । यी आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । कामै गर्न नसकिने खालका योजनाको बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नियमभित्र रहेर रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्वको स्थिति हेर्दा कर्र्णालीमा राजस्व बढाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वर्षभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हुने त देखिँदैन, तर यातायातलगायतका क्षेत्रबाट केही वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । अनुमानित राजस्व सबै उठ्ला भन्न सकिँदैन । किनकि हाम्रा स्रोतहरू थपिएका छैनन् । राजस्वका स्रोतहरू नथपेसम्म कर्णालीमा राजस्व बढाउन सजिलो देखिँदैन । अहिले त यातायात र भूमिको कारोबारबाट आउने हो । अपेक्षित राजस्व त लगभग उठ्ला । गत वर्षका सडक, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडकहरूको भुक्तानी बढ्छ । केही गत वर्ष काम भएका कृषि, शिक्षातिरका योजनाहरू फ्रिज भएका छन् । काम त भयो तर कोरोनाले भुक्तानीलगायतका काममा प्रभावित गरेको थियो । त्यो यस पटक भुक्तानी हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रगति गत वर्षभन्दा राम्रो छ
डा. इश्वर गौतम
उपाध्यक्ष, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग
लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेखनीय काम भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रभाव पर्दा सिंगो देशसँगै हाम्रो प्रदेश पनि अछुतो रहेन । तापनि प्रदेशमा कोरोनासँग जुध्दै विकास–निर्माणलगायतका काम निरन्तर भएका छन् ।
अहिलेको प्रगति गत आर्थिक वर्षको भन्दा राम्रो छ । गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा करिब ८ प्रतिशत खर्च भएकोमा अहिले ११.५० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । मंसिरमा करिब ४.५ प्रतिशत खर्च हुँदा पाँच महिनामा (मंसिरसम्म) १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुसको तथ्यांक अध्यावधिक एक–दुई दिनमै हुन्छ र पुस महिनाको खर्च ४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अपेक्षा छ भने ६ महिनाको खर्च २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पाँच महिनामा ११ प्रतिशत खर्च हुँदा अहिले १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसले के प्रमाणित हुन्छ भने कोरोनाकै बीचमा काम राम्रो भएको सन्देश अहिले दिएको छ । अर्को कुरा, गत वर्ष बहुवर्षीय योजनाहरू कम थिए र अहिले चालू आवमा बढी छन् । बहुवर्षीय योजनामा अढाइ अर्ब रुपैयाँको कन्फरमेसन भइसकेको र ४ अर्बभन्दा बढीको हुने अपेक्षा छ । यसले पनि प्रगति राम्रो भएको संकेत दिन्छ ।
गत वर्ष जम्मा ८० प्रतिशत खर्च भएकोमा अहिले यो अवस्थामा प्रगति भयो भने ९० को हाराहारीमा पुग्छांै । ६ महिनामा २० प्रतिशत भए बाँकी ६ महिनामा कसरी प्रगति हुन्छ भनेर सोधिनु स्वाभाविक हो । तर, धेरै योजनालगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेपछि मात्र पूर्ण रूपमा भुक्तान हुने र त्यो काम अन्तिम त्रैमास अर्थात् जेठ–असारमा बढी हुने भएकाले पनि प्रगति बढी जेठ–असारमा देखिने कारण हो ।
गर्वका साथ भन्नुपर्छ, अन्य प्रदेशका तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले लक्ष्यअनुसार काम गरेको छ र प्रगति पनि देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभई समग्र देशकै अर्थतन्त्र खस्किएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको कारणले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोडमा सीमित हुने अनुमान र नेपालको अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत हुने र प्रदेश अर्थतन्त्रको आकार ५ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान रहेको छ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रतर्फ होटल–रेस्टुराँ, खानी उत्खनन, उद्योग, निर्माण, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदर छ । सबै कारणले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान लुम्बिनी प्रदेशको छ ।
चालू वर्षको चार महिनाको समीक्षा गर्ने हो भने असर त परेको छ । पर्यटन, शिक्षण संस्था तथा यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित भए । तर, ठूला उद्योग, कलकारखाना, घरेलु कुटीर उद्योगमा खासै समस्या देखिएन, इच्छाशक्ति तथा धैर्यता राख्दै सञ्चालन गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका समयमा राम्रा कामको थालनी भएको छ, जुन उदाहरणीय पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैयाको बनाउने निर्णय भएको छ । पाल्पाको तानसेन र रामपुरमा २ वटा र अन्य जिल्लाका ११ गरी १३ अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको बनाउने, कपिलवस्तुमा सरुवा रोग अस्पताल, भैरहवामा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (स्थापना भइसकेको) रहेका छन् । कोरोनाकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन र ध्यान पनि स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ । कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन १० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको छ र यसको ब्याज प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । ब्याज तिर्न रकम अभाव भए थप निकासा गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक बनाउन यो योजना कोरोनाकै बीचमा ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । त्यसैगरी कसैको बाँझो जमिन भाडामा या लिजमा लिएर काम गर्न चाहनेहरूका लागि सो लिजमा लिइएको जमिनको भाडा प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय भएको छ । सहकारीमार्फत कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारीविहीन भएकाहरूलाई नै लक्षित गरी ल्याएका हांै । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याएका छौं, प्रदेशसँगै स्थानीय तह र संघीय सरकारले पनि ल्याएको छ, कतै न कतैबाट सम्बोधन हुन्छ ।
#नीति तथा योजना आयोग